Maxaad Ka Taqaan Magacyada Inta Madaxweyne Ee Dad Cadhaysani Kabo Ku Weerareen? - Wargane News
Home Entertainment & Lifestyle Maxaad Ka Taqaan Magacyada Inta Madaxweyne Ee Dad Cadhaysani Kabo Ku Weerareen?
Dunida waxa maalmo kala duwan soo maray madaxweynayaal ama hogaamiyayaal lagu shiiday kabo oo waliba madaxa lagala beegsaday. Tusaale ahaana dalka Masar falkii ka dhacday muddo ka hor ee madaxweynaha wadanka Iiraan Axmedi Nejad lagu weeraray kabo isaga oo marayay masaajidku yaalla Qaahira. Hadaba maxaad ka taqaan inta madaxweyne ee kabo lagu shiiday cadho ay dadku ka qabaan darteed.
Nejad Iyo Markii Labaad Ee Kabaha Lala Beegsaday: Madaxweynaha wadanka Iiraan Maxamuud Axmedinejad ayaa sannadkii 2011 lala beegaday kabo. Nin shaqaale ah oo cadhaysan ayaa kabo ku shiiday madaxweynaha oo booqday shaqaale ka cadhooday mushahar yaraan oo shaqo joojin sameeyey. Mar kale madaxweynaha wadanka Iiraan Axemedi Nejad waxa uu caasimadda Qaahira todobaadkii hore kala kulmay in kooxo dad ah oo gadoodasani kabo ku shiidaan.
Kabihii Bush Ee Caanka Ahaa: Madaxweyneyihii hore ee wadanka Maraykanka George W. Bush oo booqashadiisii ugu dambaysay ku marayay wadanka Ciraaq maalmo ka hor intii aanu xukunka ka degin waxa kabo ku weeraray nin wariye ah wakhti uu Bush Baqdaad ku qabanayay shir jaraa’id. Madaxweyne Bush ayaa wakhtigaasi laba kabood waxa la beegsaday nin wariye ah oo u dhashay Ciraaq. Kabahaasi Bush lagu tuuray oo ahaa kuwo dalka Ciraaq lagu farsameeyey oo qiimahoodu aad u jabnaa ayaa sannadkii 2008 waxa ay noqdeen kabaha adduunka ugu qaalisan waxaana lagu baayacay Malaayin doolar. Ra’iisal Wasaaraha Masar Iyo Shiidkii Kabaha: Ugu yaraan 16 qof ayaa ku dhintay oo ay sabab u noqdeen kabo lagu shiiday ra’iisal wasaaraha dalka Masar Hishaam Qandiil. Masuulkan oo booqanayay goob ku taalla Qaahira waxa kabo ku shiiday dad gadoodasan waxaanay taasi keentay in ay isku dhacaan dadka cadhaysnaa iyo ilaalada ra’iisal wasaarahani taasi oo keentay in 16 qof geeriyoodaan.
Beerkii Kabaha Ahaa Iyo Ra’iisal Wasaare Ordugan: Inkasta oo lagu tilmaamo hogaamiyaha ugu shacbiyadda badan bariga dhexe hadana ra’iisal wasaaraha wadanka Turkiga Rajeb Dayib Ordugan waxa kabo lagala beegsaday wajiga. Nin Kurdi ah oo cadhaysan ayaa masuulkan ku qaabiley beer kabo ah oo uu ku soo shiiday isaga oo Ra’iisal wasaaruhu safar ku maraya wadanka Spain. Sarkozy Iyo Hadhaagii Khudradda: Madaxweyneihii hore ee dalka Faransiiska Nicole Sarkozy oo laba jeer ku guulaystay xilka madaxnimo ee France aadna loo jeclaa markii hore ayaa mar kali ah shacbiyadiisii dhulka gashay kadib markii dhaqaalaha wadanka Faransiisku dhulka taabtay. Dad badan oo taasi ka cadhaysan ayaa ku mudaharaaday waxaana dhacday in isaga oo la hadlayay dad gadoodsan uu muwaadin Faransiis ahi ku soo shiiday hadhaaga qal muus oo qudhmay kaasi oo uu kala helay wajiga. In mudd ah ayaa la nadiifinayay wajiga madaxweyne Sarkozy.
Dhiigii Silvio Berlusconi: Nin cadhaysan ayaa soo gaaday ra’iisal wasaaraha wadanka Talyaaniga Silvio Berlusconi waxaanu feedh kala dhacay wajiga. Taasi oo keentay in masuulkani dhiiga shalaqsado. Ilaalada ayaan ku guulaysan in ay ninkaasi Silvio ka gaadhaan waxaana masuulkan loola cararay dhakhtar. Berlusconi ayaa wakhtigaa dhaawiciisu aad u adkaa.
Dhacdooyinkan xiisaha leh ayaa wakhtiyo isku dhawaa dhacay iyada oo saxaafadda inta badan daba gasha madaxdu aad wax uga qoreen.
Somaliland, Ethiopia,Kenyan and Somalia TV Stations to Broadcast AfriDocs Documentaries in Ethiopia
Deg Deg: Xukuumada Somaliland Oo La Filayo Inay Ka Noqoto Go,ank Xuska 18 May
Somaliland: Madaxweyne Muuse Biixi Oo Magacaabay 24 Masuul
Deg Deg: Maxa Kala Qabsaday Guddoomiye Cirro Iyo Dhalinyaradda Reer Burco
Dalka Sucuudiga Oo Qiimaha Bariisku Kor U Kaco Bisha Ramadaan !